समसमायिक राजनीतिक विषयमा नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै ! - समसमायिक राजनीतिक विषयमा नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै !
समसमायिक राजनीतिक विषयमा नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २१ असार, 05:36:09 AM
काठमाडौं । स्थायी समितिको बैठकको अजेन्डा तय गर्न सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ। यसले स्थायी समिति बैठकको छलफलको अजेन्डा तय गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ, बैठक अहिले केहीबेरमा बस्दै छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भई गठन भएपछि दोस्रोपटक स्थायी समितिको बैठक डाकिएको हो । सो बैठकले पार्टीका भातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन र मोर्चाबीच एकीकरण गर्न बाँकी रहेकाले सो विषयलाई टुंग्याउन प्रस्तावित नियमावलीमा छलफल गरेर टुंग्याउने कार्यसूची वनाएको छ ।
ओली र दाहालले जवाफ दिने
समसमायिक राजनीतिक विषय र पार्टी एकीकरणको बाँकी प्रक्रियाबारेमा आज ओली र दाहालले जवाफ दिने भएका छन्। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्माओली र पुष्पकमल दाहालले बिहीबार बस्न लागेको स्थायी समिति बैठकमा जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणबारेमा पनि पार्टीका शीर्ष नेतालाई थप जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
२०७५, २१ असार, 05:36:09 AM